လီဗာပူး ဘက်ကို သွင်းခဲ့တဲ့ ပဲလေ့စ် ရဲ့ ဦးဆောင်ဂိုး ဟာ ဘာကြောင့် ခွင့်ပြုခြင်း မခံခဲ့ရတာလဲ ? - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး ဘက်ကို သွင်းခဲ့တဲ့ ပဲလေ့စ် ရဲ့ ဦးဆောင်ဂိုး ဟာ ဘာကြောင့် ခွင့်ပြုခြင်း မခံခဲ့ရတာလဲ ?
ရုပ်သံ အကူ အညီ နဲ့ ဆုံးဖြတ် တဲ့ VAR စနစ် ဟာ အပတ် စဉ် တိုင်း မှာ ဒွိဟ ဖြစ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ကို ချမှတ် ပြီး ဝေဖန် သံတွေ ကို မပြတ် စေခဲ့ ပါဘူး ။ ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယား လိဂ် ပွဲစဉ် မှာ လည်း ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် သွင်းယူ တဲ့ ဂိုး တစ်ဂိုး ကို ပြစ်ဒဏ် ဘော အဖြစ် သတ်မှတ် ကာ ပယ်ဖျက် ခဲ့တာ ကြောင့် ဝေဖန် မှုတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ပဲလေ့စ် ဟာ အိမ်ကွင်း မှာ အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့် ၁ နေရာ က လီဗာပူး နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့ရပြီး သူ တစ်ပြန် ကိုယ်တစ်ပြန် ကစား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ပထမ ပိုင်း တစ်ဝက် လောက် မှာတော့ ပဲလေ့စ် နောက်ခံလူ တွမ်ကင်းစ် က ပြစ်ဒဏ် ဘော ကို ခေါင်းတိုက် သွင်းယူပြီး အိမ်ရှင် တို့ကို ဦးဆောင်မှု ပြုခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ကစား သမားတွေ ရဲ့ စောဒက တက်မှု ကြောင့် ကွင်းလယ်ဒိုင် ဟာ VAR က တဆင့် ပြန်လည် သုံးသပ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို သုံးသပ် ရာမှာ တော့ ပဲလေ့စ် တိုက်စစ်မှုး ဂျော်ဒန် အယူး ဟာ ဘောလုံး လာနေ စဉ် မှာ လီဗာပူး နောက်ခံလူ လိုဗရန် ကို တွန်းလှဲ ခဲ့တယ် လို့ တွေ့ ရှိခဲ့ ရတာ ကြောင့် ဒီ ဂိုး ကို ပယ်ဖျက် ကာ ပြစ်ဒဏ် ဘော အဖြစ် သတ်မှတ် ပေးခဲံ ပါတယ် ။
ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် မကျေနပ် မှု တွေ ရှိခဲ့ ပြီး Sky Sports က နေ အဆိုပါ ပွဲ ကို သုံးသပ် တင်ဆက် ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်လူ ဟောင်း ပေါလ် မာဆွန် ကတော့ VAR ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ လီဗာပူး ကို ဖလား ရ အောင် ကူညီ နေသလို ပါပဲ လို့ ဝေဖန် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ဒါ ကို ပြစ်ဒဏ် လို့ ယူဆ လို့ ရသလား ဆိုတာ ကျွန်တော် တကယ် မသိပါဘူး ။ ဒိုင် က လီဗာပူး ရဲ့ ကန့်ကွက်မှု ကို ငြင်းဆန် ဖို့ ရှက် နေသလို ပါပဲ ။ ပြီးတော့ လိုဗရန် က ဘောလုံး နဲ့ ထိလည်း မထိ ခဲ့ သလို ဘောလုံး က လည်း သူ့ အနား ကို ရောက်လာ ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး”
“ကြည့်ရတာ ကျွန်တော်တို့ လီဗာပူး ကို အခုပဲ ဖလားပေး လိုက်ရ ရင် ကောင်းမလား မသိဘူး” လို့ ပေါလ် မာဆင် က အတူ တင်ဆက် ခဲ့တဲ့ ဖီးလ် သော်မဆင် ကို ပထမ ပိုင်း အပြီး မှာ ဖွင့်ဟ ပြောဆို ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ တရားဝင် မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေ မှာတော့ ဂျော်ဒန် အယူး ဟာ ကစားကွက် အသက် ၀င် နေစဉ် အတွင်း ( ဘောလုံး ကွင်းထဲမှာ ရှိနေစဉ် အတွင်း ) လိုဗရန် ကို ပြစ်ဒဏ် ကျုးလွန် ခဲ့တာ ကြောင့် ကွင်းလယ်ဒိုင် ကီဗင် ဖရိုင်း က သွင်းဂိုး ကို ပြစ်ဒဏ်ဘော အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးအပ် ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ဟာ ဒုတိယ ပိုင်း မှာတော့ မာနေး ရဲ့ ဂိုး နဲ့ ပွဲ ကို ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပြီး မိနစ် ၈၀ ကျော် မှာ ဇာဟာ ရဲ့ ချေပဂိုး ကို ခွင့်ပြု ခဲ့ရ ပေမယ့် မိနစ် အနည်းငယ် အကြာ မှာပဲ ဖာမီနို က ဦးဆောင် ဂိုး ကို ပြန်လည် သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ပွဲပြီး ခါနီး မှာ ပဲလေ့စ် တောင်ပံ ကစား သမား ဇာဟာ အပိုင် တစ်ကြိမ် ရခဲ့ သေးေပေမယ့် ကန်ချက် များပြီး ဂိုးဘားပေါ် ကနေ ထွက်သွားခဲ့တာ ကြောင့် လီဗာပူး နဲ့ သရေ ကျမယ့် အခွင့်အရေး ကို လွဲချော် သွားခဲ့ရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကတော့ ပုံစံ ကောင်း မရခဲ့ ပေမယ့် အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲ ကို ရရှိခဲ့ တာ ကြောင့် အဆင့် ၁ နေရာ ကနေ လက်စတာ ကို ၈ မှတ် ဖြတ်ကာ ဦးဆောင် ထားနိုင် ဆဲ ဖြစ် ခဲ့ ပါတယ် ။ လာမယ့် ကြားရက် မှာတော့ ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲစဉ် အဖြစ် နာပိုလီ အသင်း ကို အိမ်ကွင်း မှာ လက်ခံ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အနိုင် ရခဲ့ပါက အုပ်စု အဆင့် ကနေ တက်ရောက်နိုင် မှာပဲဖြစ် ပါတယ် ။